Buy 24V to 12V Converter (19,500Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ကြည့်သူအရေအတွက်: 244 (+ 1 )
24V ကားများအတွက် 12V ကားပစ္စည်းများ အသုံးပြုနိုင်ဖို.
ဆိုင်ကယ် 24V ကို 12V ပစ္စည်းများ အသုံးပြုနိုင်ဖို.
24V to 12V Converter လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
အသုံးပြုဖို. ခေါင်းနှစ်ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အနီ၊ အပြာ ကြိုးနှစ်ကြိုးကို
Input 12V သို. 24V ပေးခြင်းဖြင့်
Output မှာ 12V တစ်ပေါက်နဲ. 5V USB နှစ်ပေါက် ထွက်ပါမယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ တပ်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်ပါက ကားဆိုင်တွေမှာ
2.1A 5V နှစ်ခုနဲ. 12V output တစ်ခု ထွက်ပါမယ်။
power အဖွင့်အပိတ် လုပ်လို. ရပါတယ်။
အထဲမှာ fuse လည်း ပါပါတယ်။
ရေဆိုခံတဲ USB ကာဗာလေးလည်း ပါပါတယ်။( မှတ်ချက် – အဖုံးဖွင့်ထားရင် ရေစို မခံပါ)
ကြိုးအရှည် – 1.8M
Input က 12v နဲ. 24V သာ ဖြစ်ရပါမယ်။
အိမ်မီး 220v နဲ.ထိုးရင်လောင်နိုင်ပါတယ်။
12V socket မှာ တစ်ခါတည်း ထိုးလို. မရပါ။
ဈေးနှုန်း – 19500 kyats
အမည်: 24V to 12V Converter